Ngokuvamile ematafuleni abanikazi abaningi besifazane kukhona izitsha nomklamo wokuqala. Ukwenza isicelo sokuzijabulisa kwenza kube yithandwa kakhulu. Ngaphezu kwalokho, kudala umkhathi owengeziwe, okwenza iholidi elijabulisayo nelithambile kusukela edilini evamile.
Ngakho, isaladi "Shishka" izobukeka kahle kunoma yiliphi itafula, futhi nakakhulu njalo ngonyaka wonyaka omusha. Uzodinga amagremu angama-200 ama- pine nati (ehlutshiwe), ukhilimu ushizi (amagremu ayi-100), i-ham (200 amagremu), imifino, imayonnaise, i-garlic (ama-clove amabili), ama-alimondi. Ushizi lushaywa nge-blender kanye ne-garlic, imayonnaise namagilebhisi, ucezu kasawoti lufakwa lapha. I-ham igawulwa ngamabhantshi amancane, axhunyiwe emzimbeni owamukeliwe. Ingxube ibhalwe ngamanothi kaphayini. Ngemizuzu embalwa ufakwa efrijini. Isidlo senziwa ngesisindo seladi ngesimo se-cone. Ama-alimondi owomile ku-microwave noma kuhhavini kufanele agcinwe ngokuphelela. Isaladi Yonyaka Omusha "Shishka" ihlotshiswe ngemifino, abaqhekeki bahlelwe nxazonke.
Ngaphezu kwalokho, ungenza okuhlukile kwesidlo ngenkomo eyilisiwe. Ngoba le nyama (300 g) idilizwe zibe fibres. Kulesi samba, thatha i-apula eluhlaza, amazambane abilisiwe (izingcezu ezimbili zobukhulu obuphakathi) kanye nekhukhamba enelisiwe, izithako zigawulwa zibe yi-cubes. Konke lokhu kuhlanganisiwe, kugqoke nge imayonnaise. Isisindo esitholiwe senziwa yi-hill esitsheni. Ungakwazi ngisho ukumboza ngemayonnaise engeziwe. Ama-alimondi anqunywe ngesigamu (udinga cishe ama-gramu angu-200, kodwa le mali ingahluka) futhi usakaze ungqimba obuningi phezulu. Kunconywa ukuhlobisa nge-salmon rosemary ngaphambi kokukhonza. Uma isisindo siningi kakhulu, ungayiphula ibe yizingxenye ezimbili, ngayinye yayo ihlelwa ngokwehlukana. Ukuze ukhethe isabelomali yansuku zonke, ama-alimondi angashintshwa ngamanqamu.
Enye indlela ongayenza ngayo isaladi "Shishka", ihlanganisa inkukhu ebilisiwe (ama-gramu angu-300), isanqante esilisiwe, amaqanda amathathu, amakhowe akheniwe, 200 amagremu. Zonke izithako zichotshoziwe, zihlangene futhi zigqoke imayonnaise. Isimiso sokuklama lapha sihlala silingana nezinguqulo zangaphambilini.
Ukuhlobisa kwanoma yiliphi itafula lokugcoba kungaba isaladi "Isigaxa sePine". Kuye, amazambane (izingcezu ezingu-3 zobukhulu obuphakathi) kanye nenani elifanayo lamaqanda abilisiwe, agxilwe kwi-grater. Futhi woza ushizi (ungathatha noma yikuphi okuhlukahlukene, ngokwesiko uthatha i-fused, amaphakethe amabili okwanele). Amantongomane (ama-walnuts, ama-alimondi, amantongomane noma abanye) achotshoziwe. Inombolo yabo ithathwe kuye ngesifiso. Isifuba senkukhu esitsheni sinqunywa ngamacube. Ama-anyanisi amabili ahlanzwa, aqoshwe kahle, aphethwe ngamanzi abilayo. Kulezi izitsha ezilungiselelwe, okungcono kakhulu, isaladi isetshenziswe emigqeni, ngayinye ezobe yenziwe nge-mayonnaise, ngendlela ye "cutlets" encane. Okokuqala faka amazambane, phezu kwayo inkukhu, khona-ke u-anyanisi, ummbila osemathinini, amaqanda kanye noshizi, ngaphambi kokuxubana nama nati. Ngenhla, isaladi lihlotshiswe ngama-alimondi. Esikhundleni sommbila, ungathatha ama-peas aluhlaza noma ukhukhamba okufakwe emathisini, kuye ngokuthandayo. Futhi ukuhlobisa uthathe impaphe ye-anyanisi eluhlaza.
Okukhethwa kukho okulandelayo, okuyinto nje ukulungisa isaladi "Shishka", kuyoba kanje. Kuzothatha ushizi ocibilikile "Kosichka", cishe amagremu angu-200, ngokucophelela ukusika imicu ibe yizicucu ezincane. Inhloko yegalikhi yesayizi encane ihlanzwa, idluliselwe emaphepheni. Ama-Walnut kernels (100 amagremu) aqoshiwe kahle. Izaqathe ezintsha zihlanza futhi zihlutswe kwi-grater. Zonke izithako zixutshwe futhi zigqoke ngezimayonnaise. Ubuningi bubekwe ngesimo se-cone, kwenziwa nge-almonds.
Kumele kuqashelwe ukuthi kunezinhlobo eziningi zeladidi. Isimo esisodwa esibalulekile ukuhlobisa kwayo ngosizo lwamantongomane ngokunikeza ifomu elidingekile. Ngesikhathi esifanayo, izithako zivame ukuhlanganisa abahlukahlukene kakhulu. Kungcono ukuthatha ushizi owenziwe, ngoba kuvumela ukunikeza ukuma okufunayo. Ungafaka isidlo emaqabunga esaladi eluhlaza noma umane uhlobise ngamagatsha eRomsemary, okukhumbuza amagatsha ephayini. Kunoma yikuphi, le isaladi ingaba enye yezingubo ezibaluleke kakhulu futhi ezikhanyayo etafuleni lokugubha, ikakhulukazi phakathi namaholide omnyaka omusha.
Ukukhazimuliswa kobuKrestu kukuthokozisa kwensindiso!
Ayelapha of Rowan: izinkomba kanye contraindications